निलगिरी हिमालको काखमा रहेको ढुम्बा ताल पुग्दा फरक एवं अनुपम आनन्दको महसुस (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
निलगिरी हिमालको काखमा रहेको ढुम्बा ताल पुग्दा फरक एवं अनुपम आनन्दको महसुस (भिडियो)
१. उदाहरणीय नमुना पेश गरे बागलुङको गल्कोटस्थित दुदिलाभाटीका आमाहरुले
‘आमा’ यो शब्द घर भित्रको मात्र शोभा होइन । घर भित्रको मार्गदर्शक मात्र नभई समाज र मुलुकका लागि पनि प्रथप्रदर्शक बन्न सक्छन् आमा भन्ने उदाहरण यो मुुलुकमा पेश भइसकेको छ । तर अझै पनि गाउँघरमा आमाहरुको भुमिका उत्तिकै आवश्यक छ । देशका हरेक जिल्लामा सक्रिय रहेको आमा समूह यस्को उदाहरण हुन । गाउँघरमा आमाहरु सक्रिय हुँदा समाज अनुशासित मात्र बन्ने नभई सुसंस्कृत पनि बन्न पुग्छ ।
यस्तै नमुना पेश गरेका छन अहिले बागलुङको गल्कोटको दुदिलाभाटीका आमाहरुले । भजन गाएर जम्मा गरेको रकमले उनीहरुले गाउँघको बाटोघाटो, खानेपानी र विद्यालय निर्माणमा सहयोग गर्दै आएका छन् । गाउँको साना ठूला कुनै पनि विकासको कार्यका लागि उनीहरु न स्थानीय सरकार न त अन्य कुनै सरोकारवाला निकायको नै मुख ताकेर बस्छन् । आफ्नो समूहमा जम्मा भएको रकमले गाउँको विकासमा कुटो कोदालो चलाउन थालिहाल्छन । गल्कोटे आमाहरुको यो सक्रियतालाई सलाम भन्न करै लाग्छ ।
२. निलगिरी हिमालको काखमा रहेको ढुम्बा ताल पुग्दा फरक एवं अनुपम आनन्दको महसुस
ढुम्बा ताल, मुस्ताङलाई चिनाउने अर्को महत्वपूर्ण थलो बन्न पुगेको छ । मुस्ताङलाई चिनाउने धेरै आयामहरु अस्तित्वमा छन् । तर अझै पनि धेरै थलोहरु ओझेलमा नै परेका छन् । यद्धपि ढुम्बा तालले बटुल्न र आकर्षित गराउन थालेको बाह्य र आन्तरिक पर्यटकको ताँत देख्दा पनि यो तालसंग रहेको विलक्षण आकर्षण प्रष्ट हुन्छ । सफा र कञ्चन ताल त्यसमाथि वरिपरिको स्वच्छ वातावरण निकै मनमोहक लाग्छ । निलगिरी हिमालको काखमा रहेको ढुम्बा ताल पुग्दा फरक एवं अनुपम आनन्दको महसुस भएको बताउने आन्तरिक पर्यटकहरुले नेपाल भ्रमण बर्ष ट्वान्टी ट्वान्टीमा यो ताललाई पनि जोडेर प्रचार गरिनु पर्ने सुझाव दिन थालेका छन् ।
३. युवाले रुचाउन छाडेको भेडीगोठ पेशा संकटमा परे हिमाली क्षेत्रको आर्थिक सबलता संकटमा पर्ने
भेडीगोठ हिमाली जिल्लाका वासिन्दाहरुको आयआर्जनको परम्परागत पहिचान हो । हिमाली जिल्लाहरुमा गुरुङ तथा शेर्पा समुदायले लामो समयदेखि सयौं भेडा, च्याङा पालेर भेडीगोठ चलाउँदै आएका छन । तर युवा पुस्ताले भने यो पेशाप्रति देखाएको उदासिनताले यो परम्परागत पहिचान नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिन पुगेको छ । यद्धपि लमजुङको बिभिन्न गाउँमा अझै पनि ९० भन्दा बढी घुम्ती भेडीगोठहरु अस्तित्वमा छन् र यी भेडीगोठहरुमा १५ हजार बढी भेडा च्याङग्रा पालिएका छन् ।
करोडौं रुपैयाँमा कारोबार हुने यी भेडीगोठहरु हिमाली जिल्लाका वासिन्दाहरुको हातमुख जोर्ने महत्वपूर्ण माध्यम पनि बनेका छन् । युवा पुस्ताले रुचाउन छाडेको यो पेशा संकटमा परे हिमाली भेगका वासिन्दाको आर्थिक सबलतामा पनि संकट छाउने निश्चित छ । त्यसैले हिमाली वासिन्दाको यो हिम्मतलाई जोगाइराख्न संघीय र स्थानीय सरकारले पनि ध्यान पु¥याउन आवश्यक भइसकेको छ ।